XAMPP တင်နည်း - How To Install XAMPP? - နည်းပညာ
download လုပ်ပြီးသား exe file ကို ကလစ်နှစ်ချက် နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်က ပုံတွေကို ဆက်ကြည့်သွားပါ။
ပုံ၁ ဘာသာစကား ရွေးပါ
ပုံ၂ windows ရဲ့ user account control (UAC) ကို ပိတ်ပါ။ ပြီးရင် ok နှိပ်ပါ။ (ဒီအဆင့်မှာ windows ရဲ့ UAC ကို အမှန်တစ်ကယ် ပိတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတာ အခက်အခဲရှိရင် comment ချန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။)
ပုံ၃ Next နှိပ်ပါ။
ပုံ၎ Next နှိပ်ပါ။
ပုံ၅ မိမိတင်ချင်တဲ့ hard drive ကို ရွေးပါ၊ default C: ထဲမှာပဲ ထားချင်ရင် မရွေးလည်းရပါတယ်။ ပြီးရင် install ကိုနှိပ်ပါ။
ပုံ၆ XAMPP ကို တင်နေပါပြီ။
ပုံ၇ Finish ကိုနှိပ်ပါ။
ပုံ၈ Yes ကိုနှိပ်ပါ။
ပုံ၉ XAMPP ကို သုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပုံထဲက အနီနဲ့ဝိုင်းထားတာ နှစ်ခုကို နှိပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
ဒီ post ကို ကျွန်တော့်ကို ကိုယ်ပိုင်အချိန် တွေကို အသုံးချပြီး ရေးသားထားတာပါ။ အကျိုးရှိအောင် အသုံးချကြပါ။ ကိုယ်တိုင် အသုံးချရင်တော့ တစ်ယောက်စာပဲ အသုံးဝင်ပါမယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို share ရင်တော့ ပိုအသုံး
← Website title tag optimization – Myanmar SEO Tutorials w3schools ဒေါင်းလုပ် – Download w3schools.com for offline →
4 thoughts on “XAMPP တင်နည်း – How to install XAMPP?”
UAC ဆိုတာ user account control ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ UAC is deactivated on your system ဆိုတာက UAC ပိတ်ထားပြီးကြောင်း လာပြောတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ထပ်ပိတ်စရာမလိုပါဘူး။ တစ်ကယ်လို့ UAC is deactivated on your system အစား တစ်ခြားတစ်ခုပေါ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ပိတ်ပေးရမှာပါ။ ဘယ်လို ပိတ်ပေးရမလဲဆိုတာ ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
UAC ကို ဘယ်လိုပိတ်ရတာပါလဲ.. UAC is deactivated on your system (Recommended) လို့ပြောတည်းက ပိတ်ပေးလိုက်တာမျိုး မဟုတ်ဘူးလား။တချက်လောက် ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။တစ်ခါမှ မပိတ်ကြည့်ဖူးလို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. နောက်တစ်ခုက ကိုယ်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့စက်ကို server အနေနဲ့အသုံးပြုမှာဆိုတော့.. storage ပိုင်းအနေနဲ့ space ဘယ်လောက်ရှိရင် လုံလောက်ပါလဲ.တလုံးတည်းရှိတဲ့ကွန်ပျူတာဆိုတော့ ကိုယ့်ဒေတာတွေကော တခြားဆော့ဝဲတွေကောနဲ့ဆိုတော့ space ကဘယ်လောက်မှ မကျန်တော့လို့ပါ။အဲဒါတွေနဲ့ပက်သက်ပြီးကော. xampp ကို install လုပ်လို့ရနိုင်ပါလား။
System Requirements ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
+ 64 MB RAM
+ Windows NT, 2000, 2003, XP, VISTA, 7
XAMPP တင်ရင် အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တဲ့ software တွေက skype လိုမျိုး local server သုံးတတ်တဲ့ ကောင်တွေနဲ့ တစ်ခြား software development အတွက် server တွေတင်တဲ့အခါမှာ port တွေတိုက်ပြီးတော့ အခက်အခက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။